अभिनेता अर्बाजकी २२ बर्ष कान्छी गर्लफ्रेन्डका बोल्ड तस्बिर बने भाइरल, हेरौं तस्बिर – Jagaran Nepal
अभिनेता अर्बाजकी २२ बर्ष कान्छी गर्लफ्रेन्डका बोल्ड तस्बिर बने भाइरल, हेरौं तस्बिर
Jagaran Nepal बुधबार, साउन २७, २०७८
बलिउड अभिनेता तथा निर्देशक अर्बाज खानकी गर्लफ्रेन्ड जोर्जिया आन्द्रियानीको तस्बिर भाइरल बनेको छ। समुन्द्रको किनारमा बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत भएकी ३१ वर्षीया जोर्जिया बिकिनीमा देखिएकी छिन्।
इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिएको तस्बिरमा उनले ‘जीवन समुन्द्रको किनारजस्तै’ भनेर क्याप्सन लेखेकी छिन्। ५३ वर्षका अर्बाज बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका भाई हुन्। सन् २०१७ मा अर्बाजको अभिनेत्री मलाइका आरोरासँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो।
पछिल्लो समय भने अर्बाज जोर्जियासँगको प्रेम सम्बन्धमा छन्। सन् २०१८ यता उनीहरु सँगै देखिन थालेका हुन्। जोर्जिया इटालीकी मोडल, डान्सर र अभिनेत्री हुन्। हाल उनी भारतीय गीतहरुमा पनि देखिन थालेकी छिन्। हालै उनी मिका सिंहको गीत ‘रुप तेरा मस्ताना’मा फिचर्ड भएकी थिइन्।
बलिउड अभिनेता, निर्देशक तथा निर्माता अरबाज खान २ दशकदेखि बलिउड उद्योगमा छन् । आजसम्म आइपुग्दा पनि अरबाज खान यस अघिका वर्षहरु झैं सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन् । अरबाज खान बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानका भाइ हुन ।
तर उनले आफ्ना दाइको कारणले नभइ आफ्नो कडा मेहनत र क्षमताका कारण आज सम्म पनि काम पाइरहेको बताएका छन ।मिडियासँगको कुराकानीमा अरबाजले भने, ‘मैले अहिलेसम्म झण्डै ७० वटा फिल्ममा काम गरिसकेको छु । तर यहाँ यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसले २ वटा फिल्मपछि अभिनय गर्ने मौका नै पाएका छैनन् ।
म पछिल्लो २ दशक देखि फिल्म उद्योगमा छु । म सलमान खानको भाइ हो भन्दैमा मलाइ सधैंभरी कसैले काम दिँदैन ।सलमानको नामले मलाइ एक वा दुई फिल्ममा काम दिन सक्लान् तर कसैले पनि मेरो करियर बनाउन सक्दैनन् । मैले मेरो योग्यताका कारण काम पाइरहेको छु ।
चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस् । म आफ्नै परिश्रमले आफ्नो खुट्टामा उभिएको छु ।’अरबाज खान भारतीय सिनेमाका चर्चित स्क्रिप्ट राइटर सलिम खानका छोरा हुन । उनले सन् १९९६ मा अब्बास मस्तानको फिल्म ‘दरार’ बाट बलिउड डेब्यू गरेका थिए ।
यस फिल्ममा अरबाजको जोडीको रुपमा अभिनेत्री जुही चावला थिइन् ।त्यसपछि अरबाजले ‘प्यार किया तो डरना क्या, हेल्लो ब्रदर, कयामत, हलचल, शुटआउट एट लोखण्डवाला’ जस्ता सुपरहिट फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । त्यस बाहेक उनका केही फिल्म बक्सअफिसमा खासै सफल भएनन् ।
बलिउड यीअभिनेत्रीहरू कसलाइ कुन साइजकाे ब्रा काे जरूरत पर्छ
दिपाश्रीले खोलिन पूर्वप्रेमीलाई छाडनुको रहष्य
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्ना फ्यानहरुसँग किन माफी मागिन् ?
बाहिरियो दक्षिण भारतीय फिल्मकै सुन्दर जोडी सामन्था र नागा चैतन्यको डिर्भोषको अचम्मको कारण!
करिश्मा मानन्धरको जिद्धी- ‘केपी ओलीज्यूले नै फोन गर्नुभएको हो, मैले गरेको होइन’
यि हुन् मा’दक पदार्थ छुँदै नछुने बलिउडका ८ सेलिब्रेटीहरू
युवतीहरु २०-२२ बर्षको उमेर-मा के चाहान्छन् ? जानि राखौँ…
यी ६ दिनहरुमा भुलेर कहिल्यै पनि नराख्नुहोस शारी रिक सम्ब न्ध !
१९ वर्षीया कि,शोरीको दुई ओटा यो; नी, चि,कित्सक नै आ,श्चर्यचकित
श्रीमानको कमजोरीले गर्दा बच्चा नजन्मिएर सहमतीमा आफ्नै ससुरासंग श्रीमतीई पठाएपछि…!
वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए शा, री, रि, क सम्पर्क राख्ने नयाँ उत्तम समय !
तपाईकी श्रीमतीले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? यसरी थाहा पाउनुहोस्